ဘ၀ဇာတ်ခုံ ပန်းမျိုးစုံ: ပုပ္ပား
Unknown | 3:44 AM | သမိုင်း
အနောက်တိုင်းသားတို့က နတ်တို့ပျော်စံရာ အိုလံပတ်စ်တောင် (Mt. Olympus, an abode of the Gods ) နှင့်တူသည်ဟူ၍လည်းကောင်း အာရှတိုက်သားအချို့က ဖူဂျီတောင် (Mt. Fuji) နှင့်တူသည် ဟူ၍လည်း -ကောင်း တင်စား ပြောဆိုကြသည်။
ပုပ္ပားနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုနှစ်ခု ရှိသည်။ ပထမအဆိုမှာ ပုပ္ပားသူသည် ပုဗ္ဗ-အရှေ့အရပ်ဟူသော စကားမှ ဆင်းသက်လာပြီး ယင်းအရှေ့အရပ်မှာ ခရစ်နှစ် ၁၀၇-ခု၊ သမုဒ္ဒရာဇ်မင်းသည် ယုန်လွှတ်ကျွန်း၌ ရွာပေါင်း ၁၉-ရွာဖြင့် ပုဂံကိုတည်ထောင်သော ခေတ်ဦးပုဂံ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ရာဇ၀ံသဇာလိနီကျမ်းအဆိုအရ ယုန် လွှတ်ကျွန်းသည် ဧရာဝတီမြစ်နံဘေး ခြောက်မိုင်ခန့်အကွာရှိ တုရင်တောင်အရှေ့ဖက်တွင်ရှိ၏-ဟု ဆိုသောကြောင့် ပုဗ္ဗဟူသောအဆို မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒုတိယအဆိုမှာ ပုပ္ပားဟူသည် ပုပ္ဖဟူသောစကားမှ ဆင်း သက်လာပြီး ဓာတုပဋိသန္ဓာရကျမ်းနိဒါန်းတွင် ပုပ္ဖာဝနပဗ္ဗတ-ပန်းတောတောင်-ဟုလည်း ဆိုထားသည် ။ ရှေးစာဟောင်းတို့တွင် ပုပ္ဖ ပသဝေတိ ဇနေတီတိ ပုပ္ပား-ဟု ဆိုသော၍ အဓိပ္ပာယ်မှာ ပန်းတို့ကို ဖြစ်စေ တတ်သောကြောင့် ပုပ္ပားဟူ၍ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်လည်း ပုပ္ပားဒေသသည် အပူပိုင်းဒေသဖြစ်နေ ပါလျက် စိန်းလန်းစိုပြေကာ ရာသီအလိုက် ပန်းတို့ဖြင့် ဝေေ၀ဆာဆာရှိနေသည်ကို တွေ့ရနိုင်သောကြောင့် ပုပ္ဖဟူသောစကားမှာ လက္ခံ့နိုင်ဖွယ်စကားဖြစ်တော့သည်။
ပုပ္ပားတောင်သည် မန္တလေးတိုင်း၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အတွင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ အရှေ့မြောက်ဖက် ၁၀-မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ပဲခူးမြို့၏ မြောက်ဖက်ခြမ်းတွင် သီးခြားတည် ရှိနေသော တောင်တန်းကြီးဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်နှင့်ပုပ္ပားမြို့သည် ၄၀၅-မိုင်ကွာဝေး၍ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့၊ မြင်းခြံမြို့၊ ပုဂံညောင်ဦးမြို့တို့မှ သွားရောက်နိုင်သော ပုပ္ပားတောင်မကြီး၏ အနောက်တောင်ခြေတွင်တည်ရှိသည့် ရှေးဟောင်းမြို့လေး တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ပထမပုဂံ၏ ခုနစ်ဆက်မြောက်မင်းဆက်ဖြစ်သည့် သေလည်ကြောင်မင်း (ခရစ် ၃၄၄)သည် သီရိပစ္စယာမြို့တော်သစ်ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ အစောဆုံးမှတ်တမ်းအရ ဒုတိယပုဂံခေတ် သေ လည်ကြောင်မင်း (ခရစ် ၃၄၄-၃၈၇)သည် ဧရာဝတီမြစ်တစ်လျှောက် တကောင်းမှပုဂံသို့ မျောလာသော စကားပင်တုံးကြီးကို ဆယ်ယူကာ နတ်မောင်နှမရုပ်တု ထုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပုပ္ပားတောင်သို့ပို့ကာ နတ်ကွန်းဆောက်၍ ပူဇော်ခဲ့သည်။ ယင်းမှ ပုပ္ပားဖြစ်တည်ခဲ့သည်ဟုဆို၏။ ယင်းသေလည်ကြောင်မင်း လက်ထက်တွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ပုပ္ပားနတ်တောင်လင်္ကာသည် အစောဆုံးမြန်မာကဗျာတစ်ပုဒ်ဖြစ် ခဲ့ပြီး ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ပုပ္ပားနှင့်ပတ်သက်ကြသူများကို အများအပြား တွေ့ရသည်။ အနော်ရထာဘုရင် သည် အမိဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ နောင်တော်စုက္ကတေးမင်းကို ပုန်ကန်စဉ်က ပုပ္ပားတွင် ခြေကုပ်ယူကာ နေ ထိုင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်သောအခါ ရွှေအောင်ဇံစေတီကို တည်ထားခဲ့သည်။ ပထမပုံဂံမင်း၏ ၂၀-ဆက်မြောက် ပုပ္ပားစောရဟန်းမင်းသည် ပုပ္ပားနယ်သားဖြစ်သည်။ သူရဲကောင်းလေးဦးထဲမှ ငလုံးလက်ဖယ်သည် ပုပ္ပား နယ်သားဖြစ်သည်။ ပုပ္ပားသည် မည်သည့်အချိန်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု အတိအကျဆိုရန် ခက်ခဲသော်ငြား မြန်မာမှတ်တမ်းများတွင် ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီး နှစ်ပေါင်း၁၀၁-တွင် ပုပ္ပားတောင်မြေမှ စုန့်စုန့်ပေါ်လတ္တံ့ဟု ဗျာဒိတ်တော်ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံချိန်သည် ဘီစီ၅၄၅-ဖြစ်၍ ယင်းအဆိုအရ ဘီစီ ၄၄၄-ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ မှတ်တမ်းတစ်စောင်တွင် ၄၄၂-ဟုဆိုသည်။
ဘူမိဘေဒပညာရှင်တို့ကမူ ပုပ္ပားတောင်သည် ရှေးကမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး အကြိမ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲ ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းမှ မီးသေတောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သုတေသနပြုချက်အရ သက်နှောင်းကပ် (Cenozoic Era)၏ မိုင်အိုဆင်းယုဂ် (Miocene Period) နှောင်းပိုင်း လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၁၅-သန်းခန့်က ပုပ္ပားမီးတောင် ပေါက်ကွဲဆဲဖြစ်ပြီး စတုတ္ထကပ် ပလိုင်စတိုဆင်းယုဂ် (Pleistocene Period) အလွန် နှစ် တစ်သန်းမှ ငါးသောင်းကာလအတွင်းထိ မီးသေတောင်မဖြစ်သေးပဲ ကျောက်ချောခေတ် (Neolithic Age) အစ လွန်ခဲ့သော နှစ်ခုနစ်ထောင်ခန့်ရောက်သောအခါမှ မီသေတောင်ဖြစ်သည်-ဟု ခန့်မှန်းရသည်ဆို၏။ ထိုအချိန်က ပုပ္ပားတ၀ိုက် ကျောက်ခေတ်လူသားတို့ နေထိုင်နေပြီ-ဟု အမေရိကန်ပညာရှင် Hellmut De Terra နှင့် Hellam movius တို့က ဆိုသည်။ အထောက်အထားများကိုလည်း တွေ့ရသည်။
ပုပ္ပားတောင်ကို အနောက်ဖက်မှကြည့်လျှင် တောင်ထွတ်နှစ်ခုကိုမြင်ရပြီး မြောက်ဖက်မှကြည့်လျှင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဖူဂျီရာမ (Mt. Fuji) ကဲ့သို့ မီးတောင်တစ်ခုကိုသာ တွေ့ရပါမည်။ ပုပ္ပားဒေသ၏ အပူချိန်မှာ ၁၀၈ံ-ဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီး အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၅၅ံ-ဖာရင်ဟိုက်ရှိကာ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှမိုးရေချိန်မှာ ၄၅-လက် မဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် မုတ်သုန်လေသည် အနောက်အရပ်မှတိုက်လေ့ရှိ၍ နွေရာသီတွင် အရှေ့မြောက် အရပ်မှ တိုက်လေ့ရှိသည်။
မဟာဂီရိနတ်ဟူသော ဝေါဟာရသည် ပထမပုဂံ၏ ၇-ဆက်မြောက် သီရိပစ္စယာမြို့တည် သေလည်ကြောင် မင်းလက်ထက်ကတည်းက ပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာရာဇ၀င်ကျမ်းများ၏ အဆိုအရမူ ဒုတိယ ပုဂံခေတ် သေလည်ကြောင်မင်း (၃၄၄-၃၈၇) လက်ထက်တွင် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် တကောင်းမှပုဂံသို့မျောလာသော စကားပင်တုံးကြီးကို ဆယ်ယ်ကာ နတ်မောင်နှမရုပ်ထုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပုပ္ပားသို့ပို့ကာ နတ်ကွန်းဆောင်ဆောက်လုပ်၍ ပူဇော်ခဲ့သည်ဟုဆို၏။ သေလည်ကြောင်မင်း လက်တွင် ပုပ္ပားနတ်တောင်လင်္ကာပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
သိုးကလေး။ ။ ပုပ္ပားနတ်တောင်၊ အခေါင်မြင့်ဖျား၊ စုံတော်ပြားဝယ်၊ နံ့ရှားကြိုင်လွင့်၊ ခါတန်ပွင့်သည်၊ ရွှေနှင့်ယိုးမှား၊ ပန်းစံကား။
သိုးကလေး။ ။ စကားပွင့်နှင့်၊ နိုင်းတင့်နိုးသည်၊ ရဲမျိုးသမီး၊ မောင်ကြီးနှမ၊ ညက်လှပြာစင်၊ မဲ့သည်ပင်သည်၊ ခရီးသား။
သိုးကလေး။ ။ မြိတ်လွတ်စုလည်း၊ အငယ်တည်းက၊ ကျွမ်းဝင်ကြသည်၊ မွေးဘတူရင်း၊ မျိုးသည်မင်းနှင့်၊ ချစ်ခြင်းစုရုံး၊ သက်ထက်ဆုံးသည်၊ နှလုံးမခြား၊ စောင့်တရား။
ဆွေမိမင်း။ ။ မျက်သုတ်နီစဉ်၊ ရထည်းဖျင်နှင့်၊ ကျိုင်းစင်မြ၀ါ၊ မတ်ကြီးလျာကို၊ မယ်သာကြိုက်မိ၊ တုမရှိ။
ပုဂံပထမမင်းဆက် ၂၀-ဆက်မြောက် စောရဟန်းမင်း(၆၄၀)သည် ပုပ္ပားအရပ်သားဖြစ်သည်။ အနော်ရထာ မင်းသည် ဘုရင်မဖြစ်မီ နောင်တော်စုက္ကတေးမင်းကို တိုက်ခိုက်ရန် ပုပ္ပားအရပ်ကို ခြေကုပ်ယူစခန်းချခဲ့ သည်။ သူရဲကောင်းလေးဦးတွင် တစ်ဦးအ၀င်အပါဖြစ်သည့် ငလုံးလက်ဖယ်သည် ပုပ္ပားအရပ်သားဖြစ်သည်။ ကျန်စစ်သားမင်း (၁၀၈၄-၁၁၁၃)သည် မဟာဂီရိနတ်နှင့် အကြိမ်ကြိမ်စကားပြောဖူးသည်ဟု မြန်မာ ရာဇ၀င်ကျမ်းများတွင်ဆိုသည့်အပြင် မြေးတော်အလောင်းစည်သူ (၁၁၁၃-၁၁၆၀)၏ ဆရာများစာရင်းတွင် မဟာဂီရိနတ်အမည်ပါဝင်နေသည်။ နရပတိစည်သူမင်း (၁၁၇၄-၁၂၁၁)လက်ထက်ကျောက်စာတွင် မနုဟာမင်း၏သားတော် သုဓမ္မရာဇ်၊ သုဓမ္မရာဇ်၏သား အသ၀ဏ်ဓမ္မာသည် နရပတိစည်သူမင်း ၏ ရွှေလောင်းလှေတော်ကို ပုပ္ပားအရပ်၍ သွားရောက်အပ်ထားသည်။ ထို့နောက်ပြန်လည် အပ်နှံရာမှ အသ၀ဏ်ဓမ္မာ၏သားတော် နာဂသမန်းသည် ဘုရင့်သမီးတော်နှင့်လက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ မြန် မာရာဇ၀င်ကျမ်းများ၏ ဥဇနာမင်း(၁၂၄၉-၁၂၅၆)လက်ထက် မှတ်တမ်းတွင် ဥဇနာမင်း၏မိဖုရားစောသည် ပုပ့ားအရပ်သူဖြစ်သည်။ ပုပ္ပားအကြောင်း၊ မဟာဂီရိအကြောင်းကို မြန်မာရာဇ၀င်တွင် များစွာဆို ထားသော်ငြား ပုဂံခေတ်ကျောက်စာတို့တွင် တစ်ခွန်းမျှ မဆိုထားခြင်းသည် လွန်စွာသတိပြုဖွယ်ဖြစ်တော့ သည်။
ပင်းယခေတ်တွင် နောင်တော်သီဟသူသည် စစ်ကိုင်းအသင်္ခယာစောယွမ်းမင်းကို လုပ်ကြံရန် ငခင်ညိုကို နန်းတွင်းသို့ တိတ်တဆိတ်လွှတ်လိုက်ရာ အခွင့်မသာသဖြင့် အချိန်ကြာခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ရာမစားရသေး ရကား ဆာဆာရှိသည်ကြောင့် ဗလိနတ်စာကိုစားမိသဖြင့် တစ်လုပ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူးကို သိတတ်သူဖြစ် သည့်အလျောက် မသတ်ပဲပြန်လှည့်လာခဲ့သည်။ ဤတစ်ချက်သာတွေ့ရသည်။ အင်းဝခေတ်တွင် တောင် ပုပ္ပား စံကားပွင့်ဟူသော အဲချင်းလင်္ကာတစ်ပုဒ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ပုပ္ပားတောင်သည်၊ ရွှေတောင်တည့်လေ၊ ရွှေတောင်ပတ်လုံး၊ စံကားပင်နှင့် ပန်းပင်ဖုံး၊ တောင်လုံးရနံ့ ကြိုင်စွလေ။
ပုပ္ပားတောင်တွင်၊ နတ်ရှင်နှစ်ပါး၊ ရွှင်စံစား၊ ဘုံခြားဗိမ္ဗာန်၊ မြိုင်စွလေ။
လှိုင်စွလေ၊ လှိုင်စွလေ၊ လှိုင်စွလေ၊ လှိုင်စွစံကား၊ တောင်ပုပ္ပား၊ စံကားပျံ့ကြိုင်မျှ၊ ပန်းလှိုင်စွလေး။
မောင်တော်ရေထက်၊ မယ်မုတ်ရေ၊ ဆယ်လေးသာစွလေ။
ဗိမ္ဗာန်နန်းမှာ၊ ထီးစင်္ကြာဖြန့်ကာ၊ အုပ်မိုးကာစွလေး။
အင်းဝခေတ် အရှင်မဟာရဋ္ဌသာရနှင့် အရှင်မဟာသီလ၀ံသတို့က နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဗုဒ္ဓ ဘာသာသာသနာတော် ညှိုးနွမ်းမည်ကို မလိုလားသောကြောင့် ပြစ်တင်ရှုတ်ချရေးသားခဲ့ကြသည်။ မဟာဂီရိ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ တောင်ကြီးဟူသောအဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သည်။ ရှေးက သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကို ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် သစ်ပင်တောတောင်များကို ကိုးကွယ်ခြင်းအလေ့ရှိခဲ့သည်ကိုလည်း သတိပြုရာပါသည်။
အင်းဝခေတ်တွင် မည်မျှပင်ရေးသားခဲ့စေကာမူ တောင်ငူခေတ်မတိုင်မီထိ ပုပ္ပားနတ်ကို ကျွဲနွားစသည် သတ်ဖြတ်ပသကြဟန်တူသည်။ ဘုရင့်နောင်မင်းတရားကြီး(၁၅၅၀-၁၅၈၁)သည် နတ်ကိုးကွယ်မှုကို အမိန့်တော်ထုတ်ပြန်လျှက် တားမြစ်ခဲ့သည်ကို တွင်းသင်းမဟာရာဇ၀င်သစ်(ဒုတိယတွဲ)တွင် တွေ့ရသည်။
ကသည်းစော်ဘွားတစ်ဦးသည် ၁၅-နှစ်မျှသာရှိသေးသော ကသည်းမင်းသမီး နှင်းလုံခံကို စနေမင်း(၁၆၉၈-၁၇၁၄)ထံ ဆက်သခဲ့သည်။ ဘုရင်မှ မင်းသမီးကို ပုပ္ပားမြို့စားအရာ အပ်နှင်း၍ ကိုယ်လုပ်တော်အရာ ထားခဲ့သည်။ ညောင်ရမ်းခေတ်နှောင်း အင်းဝနောက်ဆုံးမင်းဆက် မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိမင်းကို မဏိ ပူရစော်ဘွားဟုံသည် အသက် ၁၂-နှစ်သာရှိသေးသော သမီးတော်ကသည်းမင်းသမီးကို ဆက်သခဲ့သည်။ ဘုရင်မှ ပုပ္ပားမြို့စားအရာအပ်နှင်းခဲ့သည်။ စိန္တကျော်သူဦးသြ၏ က၀ိလက္ခဏာသတ်ပုံကျမ်းတွင် မိစ္ဆာအားလုံး၊ လွှမ်းပိတ်ဖုံး၊ တောင်ပြုံးညီနောင်မင်း-ဟု စပ်ဆိုခဲ့သည်။
အလောင်းတော်မင်းတရားကြီးသည် ပုပ္ပားမဟာဂီရိနတ်ရုပ်များမှ နှမတော်နတ်ရုပ်၏ ဦးခေါင်းကိုငုံ၍ ရွှေ ချိန်ငါးပိဿာကို ဆက်သခဲ့သည့်အပြင် နတ်ထိန်းခုနစ်အိမ်ထောင်ကိုလည်း ခန့်အပ်တော်မူခဲ့သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား(၁၇၈၂-၁၈၁၉)ကို ၁၇၈၄-ခုတွင် ပုပ္ပားနယ်သားငဘုန်းသည် ပုန်ကန်ခဲ့သဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပရိယာယ်ကြောင့်လောမသိ မဟာဂီရိနတ်မောင်နှမတို့ကို ချီးမြှောက်ခြင်းအဆက်သွယ်ရှိခဲ့သည်။ ခရစ် ၁၇၈၅-တွင် ရွှေစင် ၅၅-ကျပ်သားဆက်သခဲ့သည်။ မင်းထုန်းမင်းသည်လည်း ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင်မင်းတစ် ပါးဖြစ်သော်ငြား ပုပ္ပားကိုစည်းရုံးရေးအသွင်ဖြင့် ပုပ္ပားဒေသခံ ဦးမှုံကို မြို့အုပ်ရာထူးအပ်နှင်းခဲ့သည်။ သီပေါ မင်းလက်ထက် နန်းသက်ခုနစ်နှစ်တွင် ပုပ္ပားနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားသည့်ဆက်နွယ်မှုမရှိခဲ့ပေ။
သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီးနောက် ပုပ္ပားဒေသမှ ဗိုလ်နက်ကျော်သည်လည်း တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်သူများအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၉၂၀-တွင် ဂေါပကလူကြီး ဦးသာတင်ဆိုသူက ပုပ္ပားတောင်ကလပ်ပေါ်သို့ တက်ရောက်နိုင် ရန် လူသွားလမ်းကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။ ၁၉၂၁-တွင် ကျိုက်ထီးရိုးဆရာလေး ဦးပန်းအေးသည် - တောင်ကလပ်ပေါ်တွင် စေတီတစ်ဆူတည်ထားခဲ့ပြီး ၁၉၂၄-တွင် ၁၈-ပေမြင့်သော တံခွန်တိုင်ကို - မောနေယျကိုယ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် တောင်ကလပ်ပေါ်တွင် စိုက်ထူခဲ့သည်။ ၁၉၂၅-တွင် ပထမဆုံး ဘာသာရေးပွဲတော်အဖြစ် အနေကဇာတင်ပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။ တောင်ကလပ်သို့တက်ရာတွင် သံလှေ ခါးဖြင့် တက်နိုင်ရန် ဆရာတော်ဦးကောသလ္လဦးဆောင်ခဲ့သည်။
မဟာမိတ်တပ်များ ပုပ္ပားရွာသို့ချီတက်သောအခါ မြေသားလမ်းအဖြစ် ချဲ့ထွင်ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၄-၁-၁၉၄၈-တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ထင်ရှားသည့်အဆောက်အဦအဖြစ် ပုပ္ပားအနီးဝန်ကျင်ရှိ တောင်ကုန်းများတွင် အ၀င် အပါဖြစ်သော သီလတောင်ပေါ်တွင် ဥာဏ်တော် ၂၇-ပေမြင့်သော ဗျာဒိတ်ပေးရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူကို ၁၉၅၉-တွင် ဆရာတော်ဦးကုမာရနှင့် ဦးသာတင်တို့က ညှိနိုင်းကာ တည်ထားခဲ့သည်။
၁။သံသတ္ထုမထွက်ဟုဆိုသည်။ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်နှင့် နှမမင်းရာ(မင်းမြတ်လှ)သည် ပန်းပဲဖိုဖြင့် ဖိုကျင်ထိုးလုပ်ကြံစီရင်ခြင်း ခံခဲ့ရသူများဖြစ်၍ ၄င်းတို့ကတားမြစ်ထားသောကြောင့် ယင်းအလုပ်ဖြင့် အသက်မွေးသူများ မကြီးပွားနိုင်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ပုပ္ပားဒေသသည် သံသတ္ထုထွက်ရာအရပ်မဟုတ် သဖြင့် မထွန်းကားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂။မြေအိုးမြေခွက်လုပ်၍ မကြီးပွားနိုင်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ပုပ္ပားဒေသသည် ရှေးကမီးတောင်ဖြစ်ခဲ့၍ အိုးလုပ်ရန် သင့်တော်သော ရွှံ့စေးမြေမျိုးမတွေ့ရသောကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
၃။ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်မောင်နှမတို့၏ ကြေကွဲဖွယ်ဇာတ်လမ်းကြောင့် ဇာတ်၊ရုပ်သေး၊ပွဲ သဘင်ထောင်ခြင်းဖြင့် မထွန်းကားနိုင်ဟုဆိုသည်။ သို့သော် ပုပ္ပားတောင်သည် သူတော်စင်တို့နှစ် သက်သော ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်ဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း ပုပ္ပားတောင်နှင့် ၁၁-မိုင်ခန့်မျှသာဝေးသော - ကျောက်ပန်းတောင်းတွင် ဇာတ်ထောင်သူများ၊ သဘင်ဂီတအနုပညာရှင်များ များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့သည် ကိုလည်းကောင်း သတိပြုသင့်ပါသည်။
၄။ဆေးဖက်ဝင်အပင်တို့ ပေါများသည်။ သက်ရင်းကြီးခေါက်ကို အစဉ်သုံးသဖြင့် ဆရာတော်ဦးနန္ဒသည် သက်တော်၁၂၁-နှစ်ရှည်ခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ဘကြီးတော်မင်းနန်းတက်စ ၁၁-၁၂-၁၈၁၉-တွင် ဘုရင့် ထံ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ စာရင်းတစ်စောင် ဆက်သခဲ့ဖူးသည်ကိုလည်းကောင်း သာယာဝတီမင်းလက် ထက် ၄-၁-၁၈၄၁-တွင် ယွန်းစုဝန်ကြီးမင်း မဟာမင်းကျော်စည်သူဦးစီး၍ အမတ်ကြီးမဟာဇေယျသင်္ကြန်က ပုပ္ပားအရပ်မှ ဆေးမျိုး ၇၄၈-မျိုး၊ ဆေးအမည် ၁၀၇၄-ပါး ပါဝင်သော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ထပ်မံဆက် သွင်းခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ၁၈-၂-၁၈၅၇-တွင် နတ်အုပ်က၀ိဒေ၀ကျော်သူ၏ မင်းတုန်းမင်းထံသို့ ဆက် သွင်းရသော စစ်တမ်းတွင် ပုပ္ပားတောင်မှ ဆးဥ၊ဆေးမြစ်၊နတ်ရေစင်များကို လွှတ်တော်တွင်ဆက်သွင်း ရမြဲဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်ကိုလည်းကောင်း ယင်းတို့ကိုထောက်သောအားဖြင့် လက္ခံရပါမည်။
၅။ပန်းမျိုးစုံပေါသည်။ ပုပ္ဇ-ဟူသောစကားမှ ပုပ္ပားသို့ဖြစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၍ ပန်းမျိုးစုံပေါခြင်းသည် မဆန်းပါ၊ ဗျတ္တပန်းဆက်သမားနှင့် ပန်းစားဘီလူးမ မယ်ကုဝဏ်တို့ဇာတ်လမ်းပင် ပေါ်ထွက်ခဲ့သေးသည်။ ပုပ္ပားတောင် ၏ ပန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဒွေးချိုး၊တေးထပ်ကဗျာများစွာလည်း ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
ဒွေးချိုး = ပန်းပန်လျှင်၊ နန်းဆန်တဲ့စကား၊ ပန်ချင်သူ ဤတောင်ထွတ်က၊ ပန်းဆွတ်လို့သွား။
၆။နတ်မြင်းရှိသည်ဟုဆိုသည်။ အထောက်ထားမတွေ့သော်ငြား မောင်တော်နတ်ကွန်းအနောက်ဆောင်နားဆီမှ အရှည် ၁၁-ပေ၊ အမြင့် ၆-ပေရှိသည့် သဘာဝကျောက်နွားတစ်ကောင်နှင့် အရှည် ၁၇-ပေ၊ အမြင့် ၁၀-ပေရှိသည့် သဘာဝကျောက်နွားတို့ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ရာသည်။
၇။သဘာဝစိမ့်စမ်းရေ ပေါများသည်။ အစဉ်လာမှတ်သားချက်အရ ၉၉-ခုရှိ၍ ဘိုးတော်ဘုရား (၁၇၈၂- ၁၈၁၉) လက်ထက် ဆက်သသောရတုအရဆိုပါလျှင် အရှေ့အရပ်မျက်နှာတွင် ၈၇-ခု၊ အနောက်ဖက်တွင် ၄၆-ခု၊ တောင်ဖက်တွင် ၁၉-ခု၊ မြောက်ဖက်တွင် ၂၃-ခု၊ ပေါင်း=၁၇၅-ခု ရှိသည်။ လက်တွေ့ရှာဖွေသူတို့ အဆိုအရမူ ၁၃၂-ခုတွေ့ရပြီး ထပ်မံစစ်ဆေးသောအခါ ထို့ထက်ပင်နည်းသွားလေပြီဖြစ်သည်။
၈။နတ်ကျားရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မင်းမဟာဂီရိကို မရိုမသေပြုသူတို့ကို ပြသလေ့ရှိပြီး မင်းမဟာဂီရိမောင် -နှမကို မရိုမသေပြုသူတို့၏ ကျွဲ၊နွားတို့ကို ဖမ်းယူစားသောက်တတ်သည်ဟုဆိုသည်။ မြင်ဖူးသူမရှိသော် လည်း ခြေရာကို တွေ့ရတတ်သည်ဆို၏။ တောတွင်းရှိ သာမန်ကျားခြေရာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၉။မြွေဆိုးမရှိဟုဆိုသည်။ ရာသီဥတုနှင့် မီးတောင်မြေသဘာဝအနေထားအရ အဆိပ်ပြင်းမြွေ မရှိခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၁။ပုပ္ပားတောင်ဥယျာဉ် (Popa Mountain Park) = ၁၉၈၃-တွင် တည်ထောင်ပြီး ၁၉၉၃-တွင် သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၄၉.၆၃ စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ကိုလိုနီခေတ် ၁၉၀၂-တွင် ဘေးမဲ့တောအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၄-၅၅-တွင် ထိန်းသိမ်းကန့်သတ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ပြန်သည်။
၂။ပုပ္ပားတောင် အပန်းဖြေဟိုတယ် (Popa Mountain Resort) = ၉-၂-၁၉၈၈-တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၃။မီးတောင်ဟောင်း = ဘီစီ ၄၄၂-တွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး ယခုအခါ မီးသေတောင်ဖြစ်နေပေပြီ။ ဤမီးတောင်ဟောင်း ပေါက်ကွဲရာမှ မီးတောင်၏အဆို့ (Volcanic Plug) သည် ပုပ္ပားတောင်ကလပ် ဖြစ်ခဲ့ သည်ဟူသော အဆိုတစ်ရပ်လည်းရှိသည်။
၄။ပညာပေးပြခန်း (Environmental education Centre)
၅။ဆေးဖက်ဝင်အပင်များစိုက်ခင်း = (Popa Medical Plants) = ဆေးဖက်ဝင်အပင်မျိုးပေါင်း ၃၅၀- ခန့် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
၆။စန္ဒကူးတော = သစ်ခွစသည့် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ မျိုးလေးဆယ်ခန့်ကို လေ့လာနိုင်သည်။
၈။ငှက်ကြည့်ခြင်း = ပုပ္ပားတွင် ငှက်မျိုးပေါင်း ၁၃၀-ကျော်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို ၁၃၀-တို့သည် မြန်မာ ငှက်တို့အပြင် နိုင်ငံခြားငှက်များလည်း အ၀င်အပါဖြစ်သည်။ ဒေသခံငှက်မျိုး ၇၀ခန့်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားငှက်မျိုး ၃၀ကျော်ခန့် ရှိသည်။
၉။လိပ်ပြာကြည့်ခြင်း = ကမ္ဘာပေါ်တွင် လိပ်ပြာမျိုးရင်း (Family) ၁၀-မျိုးရှိပြီး အမျိုးအစားမှာ ၁၇၅၀၀-ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးရင်း ၉-ခု၊ အမျိုးအစား ၁၀၀၄-ခုရှိသည်။ မြန်မာတွင် ကမ္ဘာ့ရှားပါးလိပ်ပြာ ၆-မျိုးရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ 1.Apollo 2.Kaiser. 3.4.The Common Birdwing နှစ်မျိုး 5.6.The Golden Birdwing နှစ်မျိုး တို့ဖြစ်သည်။
ပုပ္ပားတောင်ကလပ်ကို ၁။တောင်ကလပ် ၂။နဂါးရစ်တောင် ၃။ပန်းပေးတောင် ၄။ဘဇဂါမ်တောင် ၅။၀ဏ္ဏ ယက္ခတောင် ၆။၀ိဇ္ဇာဓရတောင်ဟူ၍ အမည်ခြောက်မျိုးဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။ နံပါတ်လေးအမည်သည် ရှေး အကျဆုံးအမည်ဖြစ်သည်။ မြင်းခြံကျောက်ပန်းတောင်းသွား မော်တော်ကားလမ်းဆုံနေရာမှ တောင်ကလပ်သို့ ၂-မိုင်ခရီးဖြင့် ရောက်နိုင်ပါသည်။ တောင်ကလပ်သည် တောင်မကြီးနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိပဲ သီးခြားတည်ရှိ ကာ တောင်မကြီးနှင့် နှိုင်းစာလျှင် ထက်ဝက်မျှသာရှိသည်။ အမြင့် ၂၄၁၇-ပေရှိပြီး စောင်းတန်း အတက် လမ်းတစ်လျှောက် မျောက်များအစာတောင်းကြသည်ကိုလည်းကောင်း မျောက်စာရောင်းကြသူတို့ကိုလည်းကောင်း တွေ့ရသည်။ ပုပ္ပားတောင်ကလပ်၏ အနောက်တောင်ဘက်ရှိ ထောက်ရှာရိုးအထက်နားတွင် ရှင်သာရဒရသေ့နေထိုင် ခဲ့ဖူးသည်ဟုလည်းကောင်း ၄င်းရသေ့သည် ဒေါက်ချာဟူသော အသုံးအဆောင်ကို စတင်သုံးစွဲခဲ့သည် ဟု လည်းကောင်း ဆိုကြသည်။ ဦးသီလသည်လည်း ပုပ္ပားတောင်သို့အမြဲ ကြွလာတတ်သည်ဆို၏။ ဘိုးမင်းခေါင်သည် ပုပ္ပားတောင်မကြီး၏ အရှေ့မြောက်ဖက် စင်မြင့်ရွာ၌ ဖွားမြင်ပြီး ပုပ္ပားတွင် သာသနာပြု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရင်းပင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ဦးခန္တီသည် ဘိုးမင်းခေါင်၏ တပည့်ဖြစ်ပြီး ဘိုးမင်းခေါင် ထံ မကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိသည်ဆို၏။
စာရေးဆရာတင်နိုင်တိုး၏ ပုပ္ပားဟူသောစာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ်ရေးသားပါသည်